WHO က ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဆေးရွက်ကြီးတိုက်ဖျက်ရေးဆုကို ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား ပေးအပ် - Xinhua News Agency
ဆေးလိပ်သောက်သုံးမှု ဆန့်ကျင်ရေးကမ်ပိန်းဓာတ်ပုံအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဖနွမ်းပင်၊ ဇွန် ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအား ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုထိန်းချုပ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဆေးရွက်ကြီးကင်းမဲ့ရေးနေ့ဆု ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။မြို့တော် ဖနွမ်းပင်တွင် ကျင်းပသော အခမ်းအနား၌ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာ WHO ကိုယ်စားလှယ် Li Ailan က ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံ၏ ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှု ထိန်းချုပ်ရေး ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ခြင်းအပေါ် ဂုဏ်ယူကြောင်း၊ ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေး ထိရောက်သောဆောင်ရွက်ချက်များက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေပြီး ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုလည်း မြှင့်တင်ပေးလျက်ရှိကြောင်း Li က ပြောခဲ့သည်။
“ကမ္ဘောဒီးယားမှာ နှစ်စဉ် ဆေးရွက်ကြီးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ဖျားနာမှုတွေကြောင့် လူပေါင်း ၁၅,၀၀၀ ခန့်သေဆုံးနေပါတယ်။ သို့သော်လည်း မ္ဘောဒီးယားက ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေးမှာ ကြီးမားတဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ချက်တွေ လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံအတွင်း ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကလည်း လက်ရှိမှာ လျော့ကျသွားပါတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ ဆေးရွက်ကြီးထိန်းချုပ်ရေးဥပဒေပြုခြင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာ နေရာများနှင့် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းအား တားမြစ်ခြင်းအပြင် စီးကရက်ထုပ်ပိုးမှုများပေါ်တွင် ကျန်းမာရေးသတိပေးချက်ပုံများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထည့်သွင်း အကောင်အထည်ဖော်ရေး အပါအဝင် ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှု လျှော့ချရန် အဓိကဆောင်ရွက်ချက်များ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း Bunheng က ပြောခဲ့သည်။
စီးကရက်များနှင့် ဆေးရွက်ကြီးသည် နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့် ကင်ဆာရောဂါများ ဖြစ်ပွားနိုင်သည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနက အဆိုအရ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ခန့်မှန်းခြေ ဆေးလိပ်သောက်သုံးသူ ၁.၆၈ သန်းရှိပြီး တစ်နှစ်လျှင် စီးကရက်ကြောင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၁ သန်းခန့် သုံးစွဲလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
PHNOM PENH, June 12 (Xinhua) — The World Health Organization (WHO) has givenaWorld No Tobacco Day Award 2021 to Cambodia for its efforts to control tobacco use.
WHO representative to Cambodia Li Ailan on Friday presented the award to Cambodian Health Minister Mam Bunheng ataceremony held in capital Phnom Penh.
Li congratulated Cambodia on its continued efforts to control tobacco use, saying that effective tobacco control measures would help reduce poverty and enhance people’s health and wealth.
“Each year, tobacco-related illnesses claim about 15,000 lives in Cambodia; however, I have seen that Cambodia has made great strides in tobacco control and the use of tobacco in the country is currently on the decline,” she said.
Bunheng said since 2015, the kingdom has taken major measures to reduce tobacco use including the enactment ofalaw on tobacco control, ban on smoking at public areas and workplaces as well as implementation of large pictorial health warnings on cigarette packages.Cigarettes and tobacco cause heart disease, strokes and cancer.
According to the health ministry, it is estimated that the Southeast Asian nation has approximately 1.68 million smokers, spending about 201 million U.S. dollarsayear on cigarettes. Enditem
File photo of an anti-smoking campaign in Yangzhou, east China’s Jiangsu Province. (Xinhua/Meng Delong)